Iran: Voaroba ny Ambasady Britanika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2011 14:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, عربي, বাংলা, Svenska, Español, Ελληνικά, Aymara, English
Nampahatsiahy ny fanafihana tamin'ny 1979 nahazo ny ambasady Amerikana tao Teheran ihany ity tranga ity ho an'ny mpanara-baovao maro. Andro vitsivitsy lasa izay dia nifidy ny handroahana ny Ambasadera Britanika ny Parlemanta rehefa niharatsy ny fifandraisana.
Indreto ny lahatsary avy amin'ny fihetsiketsehana:
Ny mpamaham-bolongana Iraniana , Xcalibur, manoro hevitra ny olona tsy hanaraka ny tondrozotra ofisialy hilaza ireo mpanafika ho “mpianatra”. Nilaza ny mpamaham-bolongana [fa]:
Tsy marina ny filazana ireo olon-dia ireo ho mpianatra
Mpamaham-bolongana hafa, Snotes, nilaza [fa] fa ny mpianatra saikatafika Basij no nanafika ny Masoivoho, naka antontan-taratasy avy amin'ny “Fosa antitra”, ary nandoro ny saina Britanika.
Rahayi Iran niteny [fa] fa ny mpampihorohoro no nanafika ny Masoivoho Britanika.
Niditra tao amin'ny Masoivoho Britanika ny Mpiandry revolisionera mitana toerana ambony iray, Sajadi ary karazana fihantsiana ady ny fihetsika tahaka izany satria heverina ho toy ny zarantany Britanika ny Masoivoho. Mifanohitra amin'ny Lalampanorenana Iraniana ny fihetsika tahaka izany.
Manahy [fa] i H-naderifar fa:
Ho lafo dia lafo ny sandan'ny fihetsika atao tahaka izao ho an'ny firenena. Fanafihana firenena sy fanimbazimbana ny mariky ny fiandrianam-pireneny ny fanafihana Masoivoho.
Somayeh Tohidlou, ilay mpikatroka Iraniana nahazo kapoka 50 tany Teheran tamin'ny Septambra 2011 no nanoratra [fa] tao amin'ny Friendfeed:
Diso daty ve ry zareo e? Taona 2011 izao fa tsy 1979 [raha naka ny ambasadin'i Etazonia tao Teheran ny mpanao fihetsiketsehana]. 32 taona ny fitondrana izao fa tsy herintaona.